About Us - Hebei kavha Co., Ltd
Hebei Packaging Co., Ltd imwe nyanzvi nokutengesa siyana kavha masaga muna Hebei Province of China uye mumwe Distributors kupfuura iri kuchamhembe China nokuda mabhegi siyana, kusanganisira maindasitiri kavha mabhegi kuti maindasitiri, zvokurima, kuvaka, uye chicherwa chigadzirwa zvokurongedza hombe zvinhu uye nezuva kavha mabhegi kuti muzvitoro, grocers, uye wineshops zvokurongedza chii vatengi kuda.
ruzivo rwedu uye kuzvipira kuti zvinobudirira zvakatibatsira kumisa noushamwari bhizimisi nemakasitoma kubva kunyika dzakasiyana uye nemaruwa.
Tine vanoshingaira uye yakabatana mudonzvo, cheap zvinhu, uye wakanaka unobereka uye kubudiswa mafekitari kushanda pamwe chete. Saka takanyatsogadzirira kusangana chero zvako zvinoita zvinodiwa kuti chigadzirwa.
Isu Achatsiva yenyu kuvimba naye pamwe mutsa, yepamusoro zvigadzirwa, yemakwikwi mitengo uye azere Eenhede basa.
boka redu riri Shijiazhuang muGuta Hebei Province iri China. Hebei ari dunhu pedyo epakati kumavirazuva kuchamhembe China uye Shijiazhuang ndiro guta rayo guru. Tiri kuda 400 makiromita kubva Beijing (guta guru prc they), 1200 chete kubva Shanghai (guru guta riri China), uye 400 chete kubva Tianjin (a chengarava guta riri kuchamhembe China). Akawanda mafekitari edu pedyo guta rino.
Welcome to pano, kugamuchira kushanyira hofisi yedu uye mafekitari, kugamuchirwa!
Mr. Xie Li / maneja